China Ceramic / mhepo Vhura coil heaters / kudziyisa chinhu neNiCr8020 kudziyisa waya Kugadzira uye Fekitori | TANKII
Vhura Coil Heater
Ceramic / mweya Vhura coil heaters / kudziyisa chinhu neNiCr8020 yekudziya waya
Vhura maoiler heater ndiwo mweya heater ayo anofumura iwo akanyanya kupisa element element nzvimbo yakanangana nemhepo yekufema. Sarudzo yesimbi, zviyero, uye waya geji zvakasarudzwa zvinehunyanzvi kugadzira gadziriso yetsika zvichienderana nezvinodiwa nemushando. Yekutanga maitiro ekushandisa ekufunga anosanganisira tembiricha, kufefetera kwemhepo, kumanikidzwa kwemhepo, nharaunda, kumhanyisa rampu, frequency bhasikoro, nzvimbo yemuviri, simba rinowanikwa, uye hupenyu hwekupisa.
Vhura maoil element ndiwo akanyanya mhando mhando yemagetsi kudziisa chinhu nepo zvakare iri rakanyanya hupfumi rinogoneka kune akawanda ekupisa maficha. Inoshandiswa zvakanyanya muiyo duct yekupisa indasitiri, yakavhurika coil zvinhu zvine maseketi akavhurika ayo anopisa mweya zvakananga kubva kune akamiswa anomira maoiri. Aya maindasitiri anodziya zvinhu ane nekukurumidza kupisa kumusoro nguva dzinovandudza mashandiro uye zvakagadzirwa kuitira yakaderera kuchengetedza uye nyore, zvisingadhuri kutsiva zvikamu.
TANKII inogadzira inogadzira yakavhurika coil heaters, inonyanya kugadzirisa tsika-dzakagadziriswa kupisa matanho kuti akwane zvinoda zvinodikanwa. Isu tinopa yakajairwa mutsara weakavhurika coil heater ayo anogona kuchinjwa.
Vhura coil kudziyisa zvinhu kubva kuTANKII zvinowanzo gadzirirwa nzira yekudziya, yekumanikidza mweya nemaovhoni uye neyekupisa pombi zvinoshandiswa. Vhura maoiler heater anoshandiswa mutangi uye pombi kudziyisa uye / kana simbi Tubing. Kubviswa kushoma kwe1 / 8 '' kunodiwa pakati peiyo ceramic uye mukati memadziro ehubhu. Kuisa yakavhurika coil element kunopa yakanakisa uye yunifomu kupisa kupisa pamusoro penzvimbo huru yepamusoro.
Vhura coil heater zvinhu ndeye isina kunanga indasitiri yekudziya mhinduro yekudzora watt kuwanda zvinodiwa kana kupisa kupisa pamusoro penzvimbo yepombi yakabatana neyakaipisa chikamu uye kudzivirira kupisa kunopisa zvinhu kubva pakubika kana kupaza.
Zvakanakira Open Open Coil Heating Elements:
Kana iwe uchitsvaga chigadzirwa chinokodzera nzvimbo yako yakapusa yekupisa application, zvirinani utarise yakavhurika coil duct heater, nekuti inopa yakaderera kW kuburitsa.
inowanikwa mune diki saizi ichienzaniswa neakaomeswa tubular kupisa chinhu
Inosunungura kupisa yakananga mukati merukova rwemhepo, izvo zvinoita kuti ifambe ichitonhorera iyo iyo yakagadziriswa tubular element
Iine donhwe rakadzika mukudzvinyirira
Inopa kubvumidzwa kukuru kwemagetsi
Kushandisa chaiyo yekudziisa zvinhu pamhepo yekupisa maficha kunogona kubatsira kudzikisira yako yekugadzira mitengo. Kana iwe uchida mudiwa akavimbika kune ako maindasitiri ekushandisa zvinodiwa, taura nesu nhasi. Mumwe wevashandi vedu vekutsigira vatengi anenge akamirira kuti akubatsire.
Kusarudzwa kweiyo chaiyo waya geji, waya mhando uye coil dhayamita zvinoda zvakati wandei ruzivo. Pane zvinhu zvakajairika zviripo pamusika, asi rega kazhinji zvinofanirwa kuve zvakavakirwa tsika. Vhura coil air heater anoshanda zvakanyanya pazasi pemhepo velocities ye80 FPM. Mahwindo emhepo akasimba anogona kukonzeresa kuti ma coils abatane uye apfupike. Kune akakwira velocities, sarudza tubular mweya heater kana strip hita.
Kubatsira kukuru kweakavhurika coil kudziyisa zvinhu inguva yekumhanyisa yekupindura nguva.
Iko kune yakajairwa yakavhurika coil kudziyisa zvinhu zviripo pamusika uye isu tinotakura mamwe mudura. Zvizhinji zvezvinhu izvi zvinoda kugara uchifefeterwa nemhepo pamusoro pewaya yekupokana, asi kana iko kusimba kwemawatt kwakadzikira zvakakwana vangangopisa mumhepo yakanyarara.
Air Duct kudziyisa
Pashure: Chitubu Coil
Zvadaro: Quartz infrared hita
China Kuramba Kuchenesa Wire
Kuchenesa Stranded Wire
Kuchenesa Mawaya Uye Tambo
Metal Wire Kuchenesa Zvinhu
Nicr 80/20 Kuchenesa Waya
Ribbon Alloy Bayonets, Ion Nitriding, Nichrome, Nickle Chrome Alloy Wire, Sayenzi Kunyorera, Kuayina Machines,